Falanqayn: Saamaynta kuraasta dheeraadka ah ee aqalka sare - BBC News Somali
Falanqayn: Saamaynta kuraasta dheeraadka ah ee aqalka sare
26 Disembar 2016
War-murtiyeed ka soo baxay shirkii hogaamiyayaasha Madasha Qaran ee ka socday magaalada Muqdisho dhawrkii maalmood ee ugu danbeeyay, ayaa lagu go'aamiyey in18 kursi lagu daro aqalka sare ee Baarlamaanka oo markii hore ka koobnaa 54 kursi, ka dib muran dheer oo muddaba soo jiitamayay oo ku aaddanaa sida gobollada loogu qaybiyay saamiga kuraasta aqalka sare.
Go'aankan iyo war-murtiyeedka ayaa ku soo beegmaya ayadoo 2 maalmood ay ka dhiman tahay wakhtigii loo qabtay inay dhacdo doorashada madaxweynaha, xilli dhinaca kalena khilaafaadkii kuraasta uu muranku ka taagnaa aan xal laga gaarin.
Arrimahaas iyo saamaynta ay ku yeelan karaan geeddi socodka doorashooyinka Soomaaliya ayuu Faarax Lamaane ka waraystay Maxamed Nuur Caalin oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Maqal Waa maxay ujeedada laga leeyahay bandhigga buugaagta ee Kismaayo?
Waa maxay ujeedada laga leeyahay bandhigga buugaagta ee Kismaayo?
Maqal Sidee looga faaideysan karaa biyaha roobka?
Sidee looga faaideysan karaa biyaha roobka?
Maqal Beeraleyda Gaarisa oo ka cabanaya daadad ku soo rogmaday beerahooda
Beeraleyda Gaarisa oo ka cabanaya daadad ku soo rogmaday beerahooda
Maqal Taxanihii malaariyada iyo dhibaatada ay u gaysato bulshada Soomaalida
Taxanihii malaariyada iyo dhibaatada ay u gaysato bulshada Soomaalida
Maqal Maxaa laga filan karaa kulanka Golaha Ammaanka ee QM ee dhibaatada Suuriya?
Maxaa laga filan karaa kulanka Golaha Ammaanka ee QM ee dhibaatada Suuriya?
Maqal Gaadiidleyda Somaliland oo cabasho ka muujiyay shidaal wasakheysan oo laga iibiyay
Gaadiidleyda Somaliland oo cabasho ka muujiyay shidaal wasakheysan oo laga iibiyay